सिल्टल: वेब डेटा चुनौतीहरू कसरी गर्ने?
व्यापारिक अनुप्रयोगहरूको लागि डेटा प्राप्त गर्न कम्पनीहरूको लागि यो एक सामान्य अभ्यास भएको छ।. कंपनियां अब द्रुत, राम्रो, र कुशल प्रविधिहरू नियमित रूपमा डेटा निकाल्नका लागि खोजिरहेका छन्. दुर्भाग्यवश, वेब स्क्रैपिंग अत्यधिक टेक्निकल छ, र यसलाई मास्टरको लागि एकदम लामो समय चाहिन्छ. वेबको गतिशील प्रकृति कठिनाइको मुख्य कारण हो. साथै, एकदम राम्रो वेबसाइटहरू गतिशील वेबसाइटहरू हुन्, र तिनीहरू स्क्रैप गर्न अति गाह्रो हुन्छन्.
चुनौतीहरु वेब निष्कर्षण मा स्टेमबाट सबै तथ्यहरु छ कि प्रत्येक वेबसाइट अनूठा छ किनकी यो सबै अन्य वेबसाइटहरु बाट अलग तरिकाले कोडित छ. त्यसैले, एकल डेटा स्क्रैपिंग कार्यक्रममा लेख्न लगभग असम्भव छ जुन धेरै वेबसाइटहरूबाट डाटा हटाउन सक्छ. अन्य शब्दहरुमा, तपाईंलाई अनुभवी प्रोग्रामरहरु को एक टीम को आवश्यकता हो कि तपाईंको (1 9) वेब प्रत्येक स्क्रैपिंग को लागी वेब स्क्रैपिंग अनुप्रयोग कोड. हरेक वेबसाइटको लागि तपाइँको अनुप्रयोग कोडिङ मात्र थोरै मात्र होइन, तर यो पनि महंगा हुन्छ, खासगरी संस्थाहरूको लागि जसले आवधिक रूपमा सैकड़ों साइटहरूबाट डेटा को निकासी गर्न आवश्यक छ।. जस्तो कि, वेब स्क्रैपिंग पहिले नै एक कठिन कार्य हो. यदि समस्या साइट गतिशील छ भने कठिनाई अझ जटिल छ.
गतिशील वेबसाइटहरूबाट डेटा निकाल्न कठिनाइहरूको लागि प्रयोग गर्ने केही तरिकाहरू तल उल्लिखित उल्लिखित गरिएको छ.
1. प्रोक्सीहरूको कन्फिगरेसन
केही वेबसाइटहरूको प्रतिक्रिया भौगोलिक स्थान, अपरेटिङ सिस्टम, ब्राउजर, र उपकरणमा पहुँच गर्न प्रयोगमा निर्भर हुन्छ।. अन्य शब्दहरूमा, ती वेबसाइटहरूमा, जुन एशियामा आधारित आगन्तुकहरूलाई पहुँचयोग्य डेटा अमेरिकाबाट आएका आगन्तुकहरूको लागि पहुँचयोग्य सामग्री फरक हुनेछ।. यो प्रकारको सुविधाले मात्र वेब क्रलरहरू भ्रमित गर्दैन, तर यसले तिनीहरूका लागि एकदम गाह्रो लाग्न सक्छ किनभने उनीहरूले क्र्याङ्गको सही संस्करण पत्ता लगाउन आवश्यक छ, र यो निर्देशन सामान्यतया उनीहरूको कोडहरूमा छैन।.
मुद्दालाई क्रमबद्ध गर्दै सामान्यतया केहि म्यानुअल कार्यको बारेमा जान्न आवश्यक छ कि कति संस्करणहरु एक विशेष वेबसाइट छ र पनि विशेष संस्करण बाट डाटा फसल गर्न प्रोक्सीहरू कन्फिगर गर्नका लागि।. यसको अतिरिक्त, साइटहरु को विशिष्ट स्थान को लागी, तपाईंको डेटा स्क्रैपर एक सर्भर मा तैनात गर्नु पर्छ जो एक नै स्थान मा आधारित वेबसाइट को संस्करण संग
2. ब्राउजर स्वचालन
यो धेरै जटिल गतिशील कोडहरूको वेबसाइटहरूको लागि उपयुक्त छ. यो ब्राउजर प्रयोग गरेर सबै पेज सामग्री प्रतिपादन गरेर यो कार्य गर्दछ. यो प्रविधि ब्राउजर स्वचालनको रूपमा चिनिन्छ. सेलेनियम यस प्रक्रियाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ किनभने यसमा ब्राउजर चलाउने कुनै पनि प्रोग्रामिङ भाषाबाट क्षमता छ.
सेलेनियम वास्तवमा मुख्य रूपमा प्रयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ तर गतिशील वेब पृष्ठबाट डेटा निकाल्नका लागि यो काम गर्दछ।. पृष्ठको सामग्री पहिले ब्राउजर द्वारा प्रदान गरिएको छ किनकी यसले पृष्ठको सामग्री ल्याउन रिवर्स ईन्जिनियरिङ् जाभास्क्रिप्ट कोडको चुनौतिहरूको ख्याल राख्छ.
जब सामाग्री गाँसिएको छ, स्थानीय रूपमा बचत गरिएको हुन्छ, र निर्दिष्ट डेटा बिन्दुहरू पछि हटाइएका छन्. यस विधिको साथ एक मात्र समस्या यो धेरै त्रुटिहरूको लागि प्रवचन हो.
3. ह्यान्डलिङ पोस्ट अनुरोधहरू
केही वेबसाइटहरू वास्तवमा निश्चित प्रयोगकर्ता इनपुट आवश्यक डेटा प्रदर्शन गर्नु अघि आवश्यक हुन्छ. उदाहरणका लागि, यदि तपाईंलाई एक विशेष भौगोलिक स्थानमा रेस्टुरेन्टहरूको बारेमा जानकारी चाहिन्छ, केहि वेबसाइटहरूले आवश्यक स्थानको जिप कोडलाई सोध्नु अघि रेस्टुरेन्टहरूको आवश्यक सूचीमा पहुँच गर्नु अघि हुन सक्छ।. यो सामान्यतया क्र्रालरका लागि कठिन छ किनभने यो प्रयोगकर्ता इनपुट चाहिन्छ. तथापि, समस्याको ख्याल राख्न, पोस्ट अनुरोधहरू तपाईंको पृष्ठ स्क्रैपिंग उपकरण को लागि उपयुक्त मापदण्डहरू प्रयोग गरेर लक्षित पृष्ठमा पुग्न सकिन्छ।.
केहि वेब पृष्ठहरु लाई AJAX लाई आफ्नो सामग्री लोड गर्न र पुनः ताजा गर्न चाहिन्छ. यी पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न गाह्रो हुन्छन् किनकि JSON फाइलको ट्रिगरहरू सजिलै पत्ता लगाउन सकिदैन. त्यसैले यो मेनुअल परीक्षण आवश्यक छ र उपयुक्त मापदण्डहरू पहिचान गर्न निरीक्षण गर्न आवश्यक छ. समाधान आवश्यक JSON यूआरएलको उपयुक्त मापदण्डको साथ हो.
अन्तमा, गतिशील वेब पेजहरू स्क्रैप गर्न धेरै जटिल हुन्छन् त्यसैले उनीहरूलाई उच्च स्तरको विशेषज्ञता, अनुभव, र परिष्कृत आधारभूत संरचना चाहिन्छ।. तथापि, केहि वेब स्क्रैपिंग कम्पनीहरूले यसलाई संभाल गर्न सक्दछ ताकि तपाईलाई तेस्रो पक्ष डेटा स्क्रैपिंग कम्पनीको भाडा लिनु पर्ने हुन सक्छ Source .